Talaado 17 Bisha Sideedaad 2021
Isniin 16 Bisha Sideedaad 2021
Axad 15 Bisha Sideedaad 2021
Dukaanka Flagship Si loogu dabaaldego sanad-guurada 30-aad, WADA Sports waxay dib ugu guurineysaa xarun cusub oo la dhisay iyo dukaan calanka. Gudaha gudaha dukaanku wuxuu leeyahay qaab alwaax weyn leh oo qaab dhismeed leh oo taageeraya dhismaha. Fiilo qaabdhismeedka qaab dhismeedka guud, alaabooyinka xargaha ayaa lagu toosiyey qalab gaar ah oo loo habeeyay. Gantaalada ayaa loo habeeyay si isdaba joog ah loona sameeyay si fudud in mid mid loo qaato. Xagga sare, qaabka loo yaqaan 'elliptical qaabka' waxaa loo isticmaalaa sidii soo bandhigid miro kala duwan oo qiimo leh iyo rakooyin casri ah oo laga soo aruuriyay dalka oo dhan oo u beddelaya gudaha dukaanka gudaha matxafka gantaalka.
Sabti 14 Bisha Sideedaad 2021
Xafiiska Isku-darka Labada Dhinac waa naqshad loogu talagalay Iskuulka Diyaargarowga Satalaytka Toshin ee Kawanishi, Japan. Iskuulku wuxuu doonayey soo dhaweyn cusub, la tashi iyo goobo kulan qol 110sqm cidhiidhi ah oo saqaf hoose leh. Naqshaddan waxay soo jeedineysaa meel bannaan oo ay ku calaamadsan tahay soo dhoweyn ballaaran oo saddex geesood ah iyo miiska macluumaadka u qeeybinta u kala qeybinta qaybaha shaqada. Miiska dushiisa waxaa lagu daboolaa warqad si tartiib tartiib ah u kacaya. Isku-darkaan waxaa lagu soo qaatay muraayadaha gidaarka gadaashiisa iyo muraayadaha aluminiumka ah oo milicsiga saqafka ku ballaarinaya ballac ballaaran.
Jimco 13 Bisha Sideedaad 2021
Qolka Show Origami Ark ama Sun Show Pafull maqaar waa qolka show-ka ee soosaarka maqaarka Sansho ee Himeji, Japan. Caqabadda ayaa ahayd in la abuuro meel awood u leh in lagu muujiyo in ka badan 3000 wax soo saar aag aad u xaddidan, oo macmiilka ka dhigaya inuu fahmo badeecooyinka kala duwan ee ugu badan marka uu booqanayo qolka show. The Origami Ark wuxuu isticmaalaa 83 cutub oo yar yar oo ah 1.5x1.5x2 m3 si iskumid ah si wada jir ah si ay u abuuraan seddex cabbir weyn oo cabbir ah waxayna siisaa booqdaha iyo khibradaha la midka ah sahaminta qolka jimicsiga.
Khamiis 12 Bisha Sideedaad 2021
Dhismaha Xafiisku PolyCuboid waa dhismaha cusub ee xaruntiisu tahay TIA, waa shirkad bixisa adeegyada caymiska. Dabaqa koowaad waxaa qaabeeyey xadka goobta iyo dhumucda 700mm dhexroor biyo ah ee gudbaya goobta xaddidaya aasaaska dhulka. Qaab dhismeedka biraha wuxuu ku milmaa qaybaha kala duwan ee halabuurka. Tiirarka iyo guluusyada ayaa ka baaba'ay saldhiga meeraha, ee ku kacaya muuqaalka shayga, halka sidoo kale laga tirtirayo dhismaha. Naqshadeynta volumetric-ka waxaa dhiirrigeliyay shirkadda TIA Logo oo dhismaha lafteeda ka dhigaysa summad matalaya shirkadda.
Electra Qasabaduhu Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
Osoro Nidaamka Miiska Furan Talaado 21 Bisha Sagaalaad
Coca-Cola Tet 2014 Baakadaha Cabitaanka Fudud Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Salaada Ciida Faafinta Farmasiga Dukaanka Flagship Xafiiska Qolka Show Dhismaha Xafiisku